Amasiko e-Ecuador | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | Ecuador, Iziqondiso
Latin America Kuyimbiza yokuncibilika yezinhlanga futhi izinkulungwane zeminyaka yempucuko namasiko ashiye ifa elibalulekile. Mhlawumbe, kumuntu ongeyena owaseMelika, akukho mehluko noma okwehlukile kepha kunjalo namuhla kufanele sikhulume nge Amasiko e-Ecuador.
I-Ecuador, izwe elincane ongahle ukwazi, phakathi kwezinye izinto, ngoba nansi i-equator, ulayini ohlukanisayo womhlaba ema-hemispheres amabili, futhi futhi ngoba uJulian Assange, umfana onama-Wikileaks amakhulu, ubengumbaleki enxusa lakhe eLondon iminyaka.
2 Amasiko e-Ecuador
Kusentshonalanga yeNingizimu Melika futhi kunogu oLwandlekazi iPacific. Uyayibeka phakathi kweColombia nePeru nenhloko-dolobha yayo idolobha laseQuito. Inezintaba, i-Andes, inogu futhi iyingxenye yehlathi elihle lase-Amazon.
Abantu bakhona yi-mestizo ngobuningi, ngaphezu kwengxenye, ingxube yabantu baseSpain kanye nenzalo yabantu bomdabu, yize kukhona nesibalo esincane sabantu abamnyama abaphuma ezigqilazweni.
Ecuador iyiriphabhuliki y kukhulunywa izilimi eziningana lapha ngaphezu kolimi oluvelele lweSpanish. Kulinganiselwa ukuthi ngokwesibonelo, abantu abangaphezu kwezigidi ezimbili bakhuluma izilimi zaseMelika, kufaka phakathi isiQuechua nezinye izinhlobo zaso, iKofan, iTetete noma iWaorani, ukubala nje ezimbalwa. Ngakho konke lokhu ngeke usakwazi ukucabanga ukuthi i-Ecuador iyisizwe esinezinto eziningi, inezilimi eziningi nabantu abaningi, iqiniso ukuthi kunamasiko amaningi amasiko.
Ngakho-ke, i-Ecuador iyizwe elihlukahlukene. Isifunda ngasinye sendawo sinokuhluka kwaso futhi lokhu kubonakala ngolimi kepha nasezingutsheni, i-gastronomy, amasiko. Kukhona izifunda ezine ezimakwe ngokuphelele: ugu, i-Andes, i-Amazon kanye neziqhingi zaseGalapagos.
Okokuqala, ngingowesifazane ngakho-ke isihloko se-machismo siyangithakazelisa. I-Ecuador iyizwe elikhanyayo, ngefa eliqinile lamaKatolika nangokuhlukaniswa okuphawulekayo kwezindima phakathi kwalokho okwenziwa yindoda nokwenziwa ngumuntu wesifazane. Yize konke kuguquka futhi kulezi zinsuku eminye imimoya ivunguza emhlabeni wonke, sesivele sazi ukuthi kubiza malini lokhu ukuguqula futhi nakhu akuhlukile.
Njengawo wonke ama-latino Abantu base-Ecuador bathanda ukuthintana ngokomzimba, ngakho-ke uma kukhona ukusondelana khona-ke ukuxhawula noma ukubingelela okusemthethweni kwe- Sawubona kanti abanye, ukwanga noma ukubambeka ehlombe. Abesifazane, bona, baqabulana esihlathini. Uma kungekho ukujwayela khona-ke kulungile ukubeka ifayela le- mnumzane, madam noma miss ngaphambi kwegama njengabangane noma umndeni kuphela abaphathwa ngegama lokuqala.
Uma umenyelwa endlini yomuntu wase-Ecuador, kunenhlonipho ukuletha isipho esingaba yi-dessert, iwayini noma izimbali. Lapha izipho zizovulwa phambi kwakho, hhayi njengakwamanye amazwe lapho lokho kubhekwa njengokweyisa. Futhi i- ukugcina isikhathi. Yebo, ufunda lelo lungelo. AmaLatinos akhululeke kakhulu kunabaseMpumalanga, ngokwesibonelo, ngakho-ke uma bekumema ngo-9 ebusuku bakulindele empeleni kusuka ngo-9: 30 ntambama.
I-toast ngaphambi kokuqala ukuphuza yinto ejwayelekile, ekumemezelweni Impilo! wonke umuntu ushaya i-toast futhi uphuza isiphuzo okukhulunywa ngaso. Ukudla kuyajabulisa kakhulu futhi kunezingxoxo eziningi. Okokugcina, kunenhlonipho enkulu ukunikeza usizo ngaphambi nangemva kokudla. Angisho ukuthi uzogeza izitsha kepha mhlawumbe ungaphakamisa izingilazi ezimbalwa. Uma esikhundleni sokuba yisidlo sabangane kunjalo okuthile okusemthethweni, ukusebenza, isimilo se-Ecuadorian siqinileKusetshenziswa iziqu zemfundo, kushintshaniswa amakhadi ebhizinisi, abesilisa baze baxhawulane nabesifazane.
NjengoLatinos ngokujwayelekile i-Ecuadorian inobungane futhi ifudumele ebudlelwaneni bakho bomuntu siqu. Bazokusondela uma ukhuluma, bazokuthinta futhi ngeke bacasuke uma wenza okufanayo. Bane- ulimi olukhulu olungakhulumi ngamazwi futhi abazincishi ukubuza yonke into. Uma ubekiwe kungakumangaza kepha akwenziwa ngenxa yenhlebo kepha kungenxa yokuthi umuntu ufuna ukuba nesithombe esakheke kakhulu ngawe.
Injani imikhuba yokugqoka yase-Ecuador? Okokuqala, kunemfashini yamazwe omhlaba futhi i-Ecuador ayikho kwenye iplanethi. Lokho kusho, kuyiqiniso futhi ukuthi isifunda ngasinye sinesitayela sezingubo nokuthi lezo zitayela ziveza ukwehluka kwamasiko ezweni. Ngokwesibonelo, enhlokodolobha iQuito, amadoda avame ukugqoka ama-ponchos aluhlaza okwesibhakabhaka, izigqoko nezikhindi uhhafu. Okhalweni kukhona i- i-shimba, u-braid omude onomsuka wangaphambi kwe-Inca futhi wendabuko kakhulu.
Ngakolunye uhlangothi, abesifazane bagqoka amabhulukwe amhlophe (kwesinye isikhathi iba mpunga noma i-khaki), enemikhono emide futhi kwesinye isikhathi inentamo ebanzi. Isiketi siluhlaza okwesibhakabhaka, ngaphandle kwepitikoti, futhi mhlawumbe sinemihlobiso ethile emphethweni. Ama-coral abomvu namasongo egolide namashali kuyangezwa, njengoba izesekeli zibalulekile. Ingubo enemibala egqokwa ngaphezulu kwehembe ibuye ibe uphawu, njengesigqoko nemigexo. Manje, endaweni engasogwini, amadoda agqoka ama-guayabera nezingubo ezilula zabesifazane.
Njengoba ubona, ayikho imvunulo eyodwa ejwayelekile Yize leyo ethwelwe eQuito futhi echazwe ngenhla isondele kakhulu kunenye. Ngakolunye uhlangothi, ezintabeni, iziketi nazo zigqokile, kepha zinemibala, ngemibala egqamile nangama-embroidery namashawuli woboya. Ngasikhathi sinye, eAmazon, amakhanda ezinsiba asaphikelela futhi kwezinye izingxenye zezwe, ngeshwa, imfashini yamazwe omhlaba isikhohliwe imvunulo ejwayelekile eseyizindawo zokuheha izivakashi kuphela.
Ekugcineni, kunezinkinga ezimbili ezizodwetshelwa: imikhosi kanye nekhishi. Okuhehayo eqenjini lokuqala yi-fIhlobo lika-Inti Raymi, Yamor noMama Negra. Owokuqala ngumkhosi onikezelwe elangeni ogubha usuku lwasebusika ngoJuni. I-Yamor igujwa ekuqaleni kuka-Septhemba e-Otavalo kanti uMama Negra wumkhosi wamaqaba owenzeka ngoNovemba.
Mayelana nekhishi isidlo esibaluleke kakhulu sosuku yisidlo sasemini y isifunda ngasinye sine-gastronomy yaso. Izinhlanzi, izimbaza nezithelo zasezindaweni ezishisayo ezinjengobhanana kugxilwe endaweni yasogwini nelayisi nenyama ezintabeni. Ungazama ceviche, imbuzi eyomile (isitshulu), esinye isobho sabizwa UFanesca ngobhontshisi, udali nommbila, i isobho lenhlanzi no-anyanisi ogwini noma Ama-Petacone, ubhanana othosiwe.
Ukuhambela i-Ecuador ngaphandle kwezimanga.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » América » Ecuador » Amasiko e-Ecuador
Izindiza ezingayi lapho zihamba khona zishibhile